Waphukile umphefumlo wam in English with examples
Results for waphukile umphefumlo wam translation from Xhosa to English
Uwuhlambile umphefumlo wam, awaba naluxolo; ndiyilibele into elungileyo.
Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho.
Wogcoba ke umphefumlo wam kuYehova, Ube nemihlali ngosindiso lwakhe.
Ziyimisebenzi ebalulekileyo izingqiniso zakho, Ngenxa yoko uzibambile umphefumlo wam.
Wuhlangule ekreleni umphefumlo wam, Okuphela kwawo, ethupheni lenja.
Bendingazi ukuba umphefumlo wam undibeke Ezinqwelweni zabantu bam, zamanene.
Hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, Bawudlavule, kungekho mhlanguli.
i need you tagalog (English>Tagalog)mind your head (English>Hindi)bayu laut (Malay>Chinese (Simplified))öntözőrendszerek (Hungarian>Estonian)moussorgski (French>Catalan)pln (English>Bulgarian)braziliană (Romanian>English)terbenam (Indonesian>Latvian)fides sine operibus mortua est (Latin>English)air and impact noise (step) (English>Romanian)jeevan parichay (Hindi>English)wakari mashta (Japanese>English)nana sa sugat (Tagalog>English)magsipagsalita (Tagalog>Greek)ganun ba talaga (Tagalog>English)i can't sa tagalog (English>Tagalog)kontrapunkt (Serbian>Romanian)لن ارسل لك حتى أراك (Arabic>English)phraséologie (French>Swedish)hindi d f (English>Hindi)kayo ang naging tulay (Tagalog>English)allah yarham (Arabic>English)sinji (Slovenian>German)choisi (French>Turkish)exacerbated (English>Latvian)